राजदरबारमा जागिर खुल्यो, तलब ३० लाख रुपैयाँ [यहाँ क्लिक गरेर अनलाइन आवेदन दिनुहोस्] – NepalajaMedia
राजदरबारमा जागिर खुल्यो, तलब ३० लाख रुपैयाँ [यहाँ क्लिक गरेर अनलाइन आवेदन दिनुहोस्]
काठमाडौं । बेलायतको राजदरबारले आवासीय दरबारमा काम गर्ने घरेलु कामदारको जागिर खुलाएको छ । विश्वभरी जहाँ सुकै स्थानबाट कामदार जान पाउनेछन् । राजदरबारको हाउसकिपरमा भर्ना हुने कामदारको सुरुवाती तलब नै वार्षिक झण्डै ३० लाख रुपैयाँ हुनेछ ।
बेलायती राजदरबारको आधिकारिक वेबसाइट द रोयल हाउसहोल्डमा यसबारेमा जानकारी दिइएको छ । दरबारको घरेलु कामदारको रुपमा भर्ना हुन चाहनेले आगामी नाभेम्बर १ तारेख सम्ममा आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
दुई नोभेम्बरमा आवेदकहरुको अन्तरवार्ता लिएर योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने कार्यक्रम छ । द रोयल हाउसहोल्ड वेबसाइटमा दिइएको जानकारी अनुसार हाउसकिपिङ असिस्टेन्ट नामक पदको उक्त जागिर बेलायतको नियम अनुसार लेभल टु अप्रेन्टिसशिपको जागिर हो ।
छनोट हुने कामदारको मुख्य काम दरबारभित्र सरसफाइ गर्नु हुनेछ । साथै दरबार भित्रका चिजवस्तुहरुको देखभाल गर्ने दायित्व पनि उसको हुनेछ । –एजेन्सी
Prevकिन आगोको छायाँ देखिदैन ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण !
Nextधन लाभ हुनु अगाडि मिल्छ यि कुराहरुको सङ्केत! पूरा पढि ॐ लेख्नु होस्!